I-LG V30S ThinQ, iselfowuni ekrelekrele apho izinikele ngamandla kwi-Artificial Intelligence | Iindaba zeGajethi
AbakwaLGG babelungiselelwe into emangazayo kule MWC 2018. Igama layo ngu: I-LG V30S ThinQ. Iselfowuni luphuculo lwe-LG V30. Nangona sinyanisekile, siselfowuni esabelana ngeempawu ezininzi zemodeli yoqobo, nangona sizinikele ngamandla kwi-Artificial Intelligence okanye kwi-AI.
I-LG V30S ThinQ siselfowuni enkulu. Njengokuba isikrini sakho sifikelela kude I-intshi ezi-6 ngokulandelelana kunye nesisombululo se-QuadHD + (2.880 x 1.400 pixels) eya kuthi ifezekise ubungakanani beepikseli nge-intshi nganye engama-538. Ukongeza, ifomathi yayo yesikrini iya kuba yi-18: 9, ngelixa itekhnoloji esetyenzisiweyo yi-FullVision, esele isetyenzisiwe kwimodeli yoqobo.
1 Imemori ye-RAM kunye nokugcinwa: umahluko omkhulu kwinqanaba lezixhobo
2 Inxalenye yemifanekiso ye-LG V30S ThinQ: intuitive Photography
3 I-AI yelizwi: Imiyalelo yelizwi kunye noMncedisi kaGoogle ngasemva
4 Iselfowuni esirhabaxa esidlulise iimvavanyo zomkhosi ezili-14
Imemori ye-RAM kunye nokugcinwa: umahluko omkhulu kwinqanaba lezixhobo
Ngoku, ukuba le LG V30S ThinQ ngowuphi na umahluko, ikwimemori yayo ye-RAM kunye nomthamo wayo wokugcina ngaphakathi. Kule meko sijamelene neqela ifikelela kwi-6 GB ye-RAM -Baza kuyenza ukuba ibethelele ngakumbi-, ngelixa amandla okugcina iifayile aya kuba yi-128 GB-kuyakubakho nohlobo lwe-256 GB. Kwaye, ewe, amakhadi e-MicroSD anokufikelela kwi-2 TB yendawo anokusetyenziswa.
Ewe unyaka waseKorea ubufuna ukubeka emngciphekweni oku kuphehlelelwa kwaye iprosesa esetyenzisiweyo ayizukuba yimodeli yakutshanje yeQualcomm (Snapdragon 845), kodwa iya kuqhubeka nokubheja Snapdragon 835 ziziphumo ezilungileyo ezinikezileyo kuluhlu oluphezulu.
Inxalenye yemifanekiso ye-LG V30S ThinQ: intuitive Photography
Emuva siyakuphindeka kabini isivamvo yekhamera yakho. Ezi ziya kuba nesisombululo se-16 kunye ne-13 yeemegapixels, ukuze sikwazi ukudlala ngeziphumo ezinzulu zeefoto zethu, into esele iba semgangathweni kwintengiso. Ngeli xesha, ngaphambili siya kuba nenye ikhamera yeefowuni zevidiyo okanye "ii-selfie" eziza kuba nesisombululo see-megapixels ezi-5. Ngoku, imisebenzi emitsha yongezwa kwikhamera- ezintathu ukuba zichaneke- kwaye zithiyiwe: I-AI CAM, i-QLens kunye neMowudi eKhanyayo.
Eyokuqala (i-AI CAM) ihlalutya ngokunzulu zonke izinto zesakhelo kunye iphakamisa umsebenzisi ukuba yeyiphi imowudi eya kulungela iziphumo zokugqibela. Ezi ndlela zinokuba: ngumzobo, ukutya, izilwanyana zasekhaya, imihlaba, isixeko, macro, ukuphuma kwelanga okanye ukutshona kwelanga.
Okwangoku, i-Qlens iya kwenza ubukrelekrele bokuzenzela busincede ekuthengeni kwethu. Oku kuyakusebenza emva kokuskena ikhowudi ye-QR ngekhamera ye-LG V30S ThinQ kwaye iya kubuyisa ulwazi olufana ne ivenkile onokukhetha ukuyithenga kwi-Intanethi, okanye iingcebiso ngeemveliso ezifanayo.
Okokugqibela, imo eBlue ifuna ukufumana isibhamu esihle kwimiboniso ephantsi. Kodwa ukuzahlula kukhuphiswano, i-LG V30S ThinQ Uya kusebenzisa uthotho lwee-algorithms ukukhanyisa imifanekiso ethathiweyo enezinto ezimbini.
I-AI yelizwi: Imiyalelo yelizwi kunye noMncedisi kaGoogle ngasemva
Imiyalelo yelizwi ibe yenye yezona zinto zibalulekileyo kwikamva kwishishini. I-LG iyakwazi oku, enkosi Umncedisi weGoogle, enye yokugqibela eza kuvela kwiqonga likaGoogle, i-LG iya kuba nakho ukubonelela ngemisebenzi emitsha kumsebenzisi kwi-LG V30S ThinQ yayo. Kwaye kukuba umthengi uya kuba nakho ukufikelela kukhetho lweemenyu ngokusebenzisa imiyalelo yelizwi ngaphandle kokuchukumisa isikrini. Ukongeza, konke oku kuya kuba kuphela kwi-LG, ke kulindeleke ukuba Oku kwandiswa kwezinye iimodeli zenkampani yaseKorea. Inkampani ibeka izimvo ngale nto kupapasho lwayo, kwaye oko kuyakwenziwa ngohlaziyo oluvela isoftwe, kodwa akaphawulanga kwanto malunga isikhathi.
Iselfowuni esirhabaxa esidlulise iimvavanyo zomkhosi ezili-14
Umsebenzisi wanamhlanje usebenzisa iselfowuni kuyo nayiphi na imeko. Kungenxa yoko le nto kufuneka ukuba izixhobo ezitsha ezisungulwe kwintengiso zinokulungiswa kuyo nayiphi na imeko ngeyona ndlela ifanelekileyo. I-LG iyalazi eli candelo. Kungoko uyenzile le LG V30S ThinQ ukuba ibe nzima. Kwaye uyingqine ngokuphumelela iimvavanyo zomkhosi ezili-14: nokumelana umhlwa; iimvavanyo zothuli; yeka iimvavanyo; Uvavanyo lwemvula; uvavanyo lokumelana namaqondo obushushu aphezulu, njl..
Okwangoku inkampani yaseKorea ayikavezi amaxabiso ale LG V30S ThinQ. Nangona ukuba sisekwe kwixabiso lokuqala lemodeli yoqobo, oku kudlule kwi-euro ezingama-800 ukuqala. Siza kubona kwiintsuku ezimbalwa ezizayo ukuba silufumana olu lwazi kwaye singakunika lona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG V30S ThinQ, iselfowuni ekrelekrele apho izinikele ngamandla kwi-Artificial Intelligence